OnePlus 9 Lite: inona no azontsika antenaina amin'ity finday manaraka ity? | Androidsis
OnePlus dia nanenjika paikady vaovao momba ny tsena hatramin'ny taona lasa, izay natomboka tamin'ny OnePlus Avaratra, ny finday avo lenta voalohany ampiasainy izay, tsy mitovy amin'ireo maodelin'orinasa mafy orina, natao ho an'ireo mpampiasa tsy dia mitaky be loatra. Avy eo, rehefa nahita fa nahomby io raikipohy io, dia nandefa andian-tsarety Nord hafa izy, dia ireo Nord N10 5G sy N100; ity farany kosa dia nisafidy chipset ambany, ka lasa fitaovana tetibola io.
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny marika dia hanohy hiloka amin'ny telefaona voalaza ao aminy, izay aseho ho safidy mahaliana ho an'ireo izay tsy afaka mahazo finday avo lenta an'ny orinasa. Na izany aza, OnePlus dia afaka nanampy andiany terminal vaovao, izay hitondra modely "Lite" amin'ny sainam-pireneny, ary izany dia hanomboka amin'ny OnePlus 9 manaraka sy ny OnePlus 9 Lite, ilay fitaovana izay efa honohono etsy sy eroa.
Ity no fantatsika hatreto momba ny OnePlus 9 Lite
Misy ny rivo-piainana andrasana mafy momba ny mety ho OnePlus 9 Lite. Na dia mbola tsy nohamafisin'ny orinasa aza ity finday ity dia voalaza fa izy io dia ho iray amin'ireo modely manaraka ho tafiditra ao amin'ny repertoire-ny, ka efa be ny resaka momba ny mety mampiavaka azy sy ny lafiny teknika izay hireharehany indray mandeha dia aparitaka eny an-tsena, izay mety hiseho amin'ny fotoana anolorana ny OnePlus 9 ary fanokafana amin'ny fomba ofisialy.
Miaraka amin'ny fanambaràn'ny Qualcomm Snapdragon 870, azo antoka fa hahita kilalao vaovao mandritra ity taona ity isika avy amin'ireo mpanamboatra smartphone, raha ny momba ny andiany avo lenta. Ary io chipset mpanodina io dia manana fahombiazana avo lenta ihany koa, ary safidy mora vidy kokoa noho ny Snapdragon 888, Sehatra finday matanjaka indrindra an'i Qualcomm ankehitriny.
Ireo fitaovana natomboka tamin'ny Snapdragon 870 dia ho mora vidy kokoa noho ireo izay manana Snapdragon 888, mazava ho azy ary porofon'izany no hitantsika tamin'ny vaovao Motorola Moto Edge S, izay nambara andro vitsy lasa izay miaraka amin'ny vidiny ambany tokony ho 250 euro hanovana, na dia mifanandrify amin'ny tsena sinoa aza io isa io; Fantatsika tsara fa hitombo be izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, kanefa na dia izany aza, io no porofo voalohany momba ny farany farany mora vidy amin'ity 2021 ity.
Na dia "mora" aza ity fitaovana avo lenta ity dia hanana trano famakiam-boky misy endri-javatra mahaliana sy fika manokana momba ny teknika, izay anananay, araka ny tsiliantsofina sy fivoahana tato ho ato. efijery diagonaly 6.5-inch -na latsaka- miaraka amin'ny taha 90 na 120 Hz; azo inoana kokoa ny hahatongavana miaraka amin'ny 90 Hz, ho setrin'izany, ny haitao an'ity tontonana ity dia ho an'ny karazana IPS LCD, hampihenana ny vidiny.
Ny RAM an'ny OnePlus 9 Lite dia hatolotra amin'ny karazany roa, izay 6 sy 8 GB. Ny habaka fitehirizana anatiny kosa dia 128 GB ihany amin'ny tranga roa, raha tsy misy ny fanitarana amin'ny alàlan'ny karatra microSD. Ity farany dia noho ny dia ho mahatohitra splash, ary ny fampiharana ny slot microSD dia mety ho olana amin'izany.
Fandikana tafaporitsaka an'ny OnePlus 9 Pro
Ny rafitry ny fakan-tsary any aoriana an'ny finday dia ho telo ary voaforona sensor lehibe an'ny 48 MP ary zoro roa sy makro 16 sy 5 MP avy. Ankoatr'izay, ny fakantsary eo anoloana, izay mety hahatratra lavaka eo amin'ny efijery, dia 16 MP.
4.300 mAh ny fahaiza-manao dia mety amin'ny batterin'ny telefaona, raha ny haitao 30-watt Warp Charge 30T haingam-pandeha no ho hitantsika. Homena vola amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo USB-C izy io.
Ny fiasa tombantombana hafa dia milaza ny mpamaky rantsantanana aoriana na eo anilany, ny fifandraisana NFC, ary ny Bluetooth 5.1. Android 11 io no rafitra fiasa ahatongavany eo ambanin'ny kinova farany OxygenOS.
Miandry ny fanamafisana sy ny fanambarana ny zavatra rehetra voalaza izahay, ary koa ny vidiny sy ny daty fandefasana azy, na dia tokony ho fantatray aza aloha raha tena halefa na tsia io maodely io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » OnePlus 9 Lite: inona no azontsika antenaina amin'ity telefaona manaraka ity?
Google dia hamela ny fampiharana filokana vola any Espana sy firenena vaovao 14 hafa
Square Enix dia mandefa gacha avy amin'ny franchise legendary miaraka amin'ny Dragon Quest Tact